Unogona Iwe kuita yakabatana kushambadzira pamwe neAdSense? - Dzidza Nyanzvi Kubloga
Chikamu chePost:Adsense / Kubatana Kushambadzira / Tora Mari Pamhepo
Iwe unogona zvechokwadi kushandisa zvakabatana kushambadzira pamwe neAdSense pamwechete pane yako blog kana webhusaiti. Iyi inzira huru yekuvandudza kuita mari yako blog. Uri kutora mukana wezvose zviri zviviri, kuwana komisheni nekusimudzira chako kana chimwe chigadzirwa chevanhu pamwe nekuwana mari nekuratidzira akasiyana mabhana ehukuru.
Google inobvumidza zviri pamutemo kuti iwe uise chako chigadzirwa chinosimudzira zvinongedzo pamwe nekuratidzira kushambadzira. Heino skrini.
Kugovana zvangu ruzivo, inotangwa bhurogu yangu nguva refu yakadzoka, Ini ndinongo ganhurira ini kuAdSense chete. Nekufamba kwenguva, as I improved my knowledge and getting better in the blogging field.
Munguva pfupi ndinoona, unogona kuita mari kuburikidza neAdSense kune hombe 5000+ madhora pamwedzi kana iwe uine mamirioni ehunhu traffic uye inofanirwa kunge ichibva kuUS, UK, Canada senyika.
Sezvo ini ndaive padanho rekutanga, zvaive zvakanyanya kuoma kuwana huwandu hwakakwira hwevashanyi.
AdSense uye Amazon, zvimwe zvekushambadzira zvakabatana pane iyo peji rewebhu
Kubatana Kushambadzira uye Mamwe Ad Adhivhosi -AdSense Imwe nzira
Kuti Sum Up
Panguva iyoyo ini ndinotanga kutarisa kune dzimwe nzira dzekuvandudza yangu blogging mihoro. Ikoko ndakawana yepamutemo Google peji rekubatsira kutsanangura mvumo yekushambadzira kwakabatana pamwe neAdSense hakusi kutyora mutemo kwakadaro kunyangwe uchishanda neamazon kana vamwe vanobatana..
Mushure maizvozvo, Ini pakarepo ndinonyorera kuAmazon's affiliate program. Panguva iyoyo bhurogu yangu yaingowana chete yakashomeka vashanyi izvo zvisingatenderwe kuti vawane runako kuwana kubva kuAdSense.
Kunyangwe pano, Ini pachezvangu ndinokurudzira iwe kana iwe uri wekutanga mune ino bogging munda, panzvimbo yekutarisa zvakanyanya paAdSense, iwe unofanirwa kutanga nehukama kushambadzira. Shure kwaizvozvo, Joinha AdSense mushure memwedzi yakawanda paunotanga kuwana huwandu hwakawanda hwevashanyi.
Iwe haugone kuenzanisa yakabatana kuwana neAdSense. Inobatanidza kushambadzira ndiyo indasitiri iri kukura iyo inokutendera iwe kuti uwane 1000 + madhora zvirinyore iwe uchaita nediki shoma traffic. Heuno humbowo hwangu hwega hwekuwana mari chete ne 100 pamwe nemotokari pazuva.
Iwe unozoshamisika kuziva kuti kana chete zana vevashanyi pamwedzi vanoshanyira webhusaiti yangu apo pasina mukana wakadai wekuwana kana $70 pamwedzi kuburikidza neAdSense.
Zvisinei, Icho chisarudzo chehungwaru kuwana mvumo yeAdSense uye unoita yakabatana kushambadzira pamwe nayo. Nekuti iwe hausi kurasikirwa nechinhu pachinzvimbo chauri kuwana mamwe madhora. Hazvina mhosva kuti mashoma kana akati wandei.
AdSense yanhasi haina kumbobvira yakaita makore apfuura, iwe unofanirwa kuisa basa rakaoma rakawanda mukuwana mari yakanaka pamwedzi. Google AdSense chigadzirwa cheGoogle. Yakave yakangwara zvekuti inoda kuyedza kukuru uye nekudzoka, haugone kuwana zana muzana izvozvi.
Chii chiri kuitika chakakomberedza? Zvakanaka, tsananguro dzakawanda asi pano ini pachezvangu ndinokuudza nyorera Ezoic.
Ezoic ndeimwe yemapuratifomu akafanana kuAdSense ayo anoshandisa smart smart artificial technology kuratidza AdSense kodhi. Nekuwana mvumo kubva kuEzoic iwe unofanirwa kuteedzera ese marongero eAdSense uye uve nemvumo yawo. kana iwe uine izvo zvino unobva wakwanisika kukodzera kune Ezoic ads.
Saka ndeupi musiyano uripo pakati peEZOIC neAdSense kuwana, rega ndijekese nemuenzaniso. Ngatitii uri kuwana 2000 peji maonero kubva kuUnited States, mune iyo AdSense, uchaita chete edu anenge anenge $5 chiuru chekuona asi kana iwe waita Ezoic kushambadza pawebhusaiti yako iwe unenge wave kuwana 10 ku 12 madhora anogona kunge ari kupfuura izvo zviri nyore.
Ukabudirira mukutyaira 50000 vashanyi ku 100000 peji rekutarira pamwedzi saka iwe unogona nyore kuenda kune mamwe mapuratifomu akavandudzwa senge midhiya iri kuuya kana Kubudirira. Aya mamwe mapuratifomu ari e chaizvo kupfuura zvaunotarisira.
Pakazara, zvinoyemurika kana iwe uchigadzira nzira yekuwana mari zvese kubva kuAdSense pamwe nekushambadzira kwakabatana. Unogona kuimhanya pane blog kana webhusaiti pasina chero kutyorwa. Pamwe chete nazvo, iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve dzimwe nzira dzeAdSense senge Ezoic, midhiya muzambiringa uye shambadziro inobudirira, nezvimwewo. Izvi zvicharatidza kuve zvinobatsira uye hazvimbokuodza moyo.
Marii yaungaite neGoogle AdSense
Unogona Mudzidzi Kuwana Mari Pamhepo?
Ini ndinogona kutenga zita rezita uye ndorishandisa Kwese?
Previous PostMarii yaungaite neGoogle AdSense?
Inotevera PostIs Amazon Affiliate Marketing Yakakodzera?
Chikumi 2, 2021